Puntland oo sheegtay in ay guddi u saari doono qiimaynta khasaaraha uu gaystay dabkii qabsaday suuqa ganacsiga ee Bossaso. – Radio Daljir
Puntland oo sheegtay in ay guddi u saari doono qiimaynta khasaaraha uu gaystay dabkii qabsaday suuqa ganacsiga ee Bossaso.
Garowe, Dec 03 – M/weynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa shir jaraa’id oo ay maanta si wadajir ah u qabteen Amb. Mahiga, wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliya ka hadlay dabkii qabsaday suuqa gacansiga ee Bossaso oo uu ku sifeeyeye masiibo dabiici ah oo khasaare lixaad leh gaysatay.
Mweyne Faroole ayaa sheegay in ay u saareen guddi baaritaan iyo qiimayn ku samayn doonta khasaaraha dhabta ah, ayna gargaar u fidin doonaan gacansatada ku xoola beeshay.
Waxaa uu ugu baaqay hay’adaha samafalka iyo ururada caalamiga ahi in ay gargaar bini’aadanimo u fidiyaan gacansatda khasaaruhu soo gaaray.
Dabka qabsaday, burburiyeyna qaybo badan oo ka mid suuqa gacansiga ee ugu weyn magaalada Bossaso, ayaa gaystay khasaare lixaad leh oo u badan mood, ayna ku cayroobeen ganacasato aad u badan, walow aan la xaqiijin khsaaraha dhabta ah ee uu dabku gaystay.
Amb. Mahiga oo isna ka hadlay khasaaraha dabka qabsaday suuqa Bossaso ayaa ku baaqay in gargaar bini’aadanimo loo fidiyo ganacsatada.
Labada mas’uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay shirka wadatashiga Somalida oo wejigiisa 2-aad lagu qaban doono Garowe, lana shaaciyey in uu furmi doono 15 – 18 bisha December, 2011, ayna ka soo qayb gali doonaan madaxda maamulada ka jira Somaliya.